အားလုံးပဲမင်ျဂလာပါ kami idabashi ဘူတာ ကနေ 12 မိနဈလမျးလြှောကျ Dish washing အလုပျပျေါပါတယျ <>အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ kami idabashi ဘူတာ ကနေ 12 မိနစ်လမ်းလျှောက် Dish washing အလုပ်ပေါ်ပါတယ်
Job Details >>>
✸ဆိုငျနာမညျ- 焼肉きんぐ　板橋前野町店
✸အမြိုးအစား- dish washing
(3 to4hours per day ok )
3 days per week Ok
full transportation fees
ဒီအလုပျကို စိတျဝငျစားရငျ အပျေါက APPLY HERE ကိုနှိပျပွီးလြှောကျထားပေးစခေငျြပါတယျ။ လြှောကျပွီးပွီးခွငျး confirmation mail ပို့ပါလိမျ့မယျ။ ပွီးတော့ ၂ရကျကနသေုံးရကျအတှငျး အငျတာဗြူး ဖွေ ဖို့ ဖုနျးချေါပါလိမျ့မယျ။
တဈခါတဈလေ မှာ ဖုနျးမချေါပဲ email ပို့ပွီး interview interview ဖွရေမယျ့နရော အခြိနျ နဲ့ ယူရမယျ့ ပစ်စညျးတှကေို ပို့ပေးတာတှရှေိပါတယျ။
၁။ ၂ ရကျအတှငျး မသိတဲ့ဖုနျးဝငျလာရငျလညျးကိုငျပေးစခေငျြပါတယျ
၂။ လြှောကျပွီးတာနဲ့နောကျနေ့ အတှငျး အမွနျဆုံး email ပို့တတျလို့ email ကို အမွဲ check ပေးစခေငျြပါတယျ
*** အကူအညီ အခကျအခဲ တဈစုံတဈရာ လိုအပျတှကွေုံ့လာပါက ဒီ page ရဲ့message ကနေ တိုကျရျိုကျမေးမွနျးနိုငျပါတယျ
***အခွားသော မေးခှနျးမြား အလုပျနဲ့ ပတျသတျတာမြားကိုလညျး ကွိုဆိုလကျြရှိပါတယျ
-ဖုနျးနာပါတျအား ဂပြနျဖုနျး (နာပါတျ ၁၁ လုံးရှိသော) ဖုနျးကို မှနျကနျစှားဖွညျ့စှကျပေးပါရနျ
-အလုပျလြှောကျပွီးပါက အငျတာဗြူး သို့ သခြောစှာ သှားပေးပါရနျ
- အလုပျခနျ့အပျဖွငျးခံရပွီးပါသျော တခွားအလုပျအငျတာဗြူးမြား ရှိခဲ့ပါက မလာ နိုငျကွောငျးကို ဖုနျးဖွငျ့ ဆကျသှယျပွောကွားပေးပါရ
✸ဆိုင်နာမည်- 焼肉きんぐ　板橋前野町店
✸အမျိုးအစား- dish washing
ဒီအလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားရင် အပေါ်က APPLY HERE ကိုနှိပ်ပြီးလျှောက်ထားပေးစေချင်ပါတယ်။ လျှောက်ပြီးပြီးခြင်း confirmation mail ပို့ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ၂ရက်ကနေသုံးရက်အတွင်း အင်တာဗျူး ဖြေ ဖို့ ဖုန်းခေါ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတစ်လေ မှာ ဖုန်းမခေါ်ပဲ email ပို့ပြီး interview interview ဖြေရမယ့်နေရာ အချိန် နဲ့ ယူရမယ့် ပစ္စည်းတွေကို ပို့ပေးတာတွေရှိပါတယ်။
၁။ ၂ ရက်အတွင်း မသိတဲ့ဖုန်းဝင်လာရင်လည်းကိုင်ပေးစေချင်ပါတယ်
၂။ လျှောက်ပြီးတာနဲ့နောက်နေ့ အတွင်း အမြန်ဆုံး email ပို့တတ်လို့ email ကို အမြဲ check ပေးစေချင်ပါတယ်
*** အကူအညီ အခက်အခဲ တစ်စုံတစ်ရာ လိုအပ်တွေ့ကြုံလာပါက ဒီ page ရဲ့message ကနေ တိုက်ရိ်ုက်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်
***အခြားသော မေးခွန်းများ အလုပ်နဲ့ ပတ်သတ်တာများကိုလည်း ကြိုဆိုလျက်ရှိပါတယ်
-ဖုန်းနာပါတ်အား ဂျပန်ဖုန်း (နာပါတ် ၁၁ လုံးရှိသော) ဖုန်းကို မှန်ကန်စွားဖြည့်စွက်ပေးပါရန်
-အလုပ်လျှောက်ပြီးပါက အင်တာဗျူး သို့ သေချာစွာ သွားပေးပါရန်
- အလုပ်ခန့်အပ်ဖြင်းခံရပြီးပါသော် တခြားအလုပ်အင်တာဗျူးများ ရှိခဲ့ပါက မလာ နိုင်ကြောင်းကို ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ပြောကြားပေးပါရ
အားလုံးပဲမင်ျဂလာပါ Seibu Shinjuku ဘူတာ ကနေ4မိနဈလမျးလြှောကျ Yakiniku စားသောကျဆိုငျအလုပျပျေါပါတယျ လကျပေးOk /အားလုံးပဲမငျြဂလာပါ Seibu Shinjuku ဘူတာ ကနေ4မိနစလြမြးလွှောကြ Yakiniku စားသောကဆြိုငအြလုပပြေါပြါတယြ လကပြေးOk
Part-time job for foreigners. Convenience store/ Sales staff in tokyo | Nihon de Baito
Roppongi ဘူတာကနေ3မိနဈလမျးလြှောကျ Cantonese Restaurant အလုပျပျေါပါတယျ / Roppongi ဘူတာကနေ3မိနစ်လမ်းလျှောက် Cantonese Restaurant အလုပ်ပေါ်ပါတယ်
Part-time job, Japanese, beginners ,Restaurants ,Tokyo
फुकुओका स्थित् रेस्टुरेन्ट / इजाकाया मा विदेशीहरूको लागी पार्ट टाइम काम।
विदेशीहरूको लागी पार्ट टाइम काम। [निहोन दे बाइतो] जापानमा काम यस इजाकाया को काम फुकुओका मा रहनुभएको सबै विदेशीहरुको लागि खुल्ला छ!
Tokyo ဘူတာကနေ 1 မိနဈလမျးလြှောကျ Japanese Restaurant အလုပျပျေါပါတယျ/ Tokyo ဘူတာကနေ 1 မိနစ်လမ်းလျှောက် Japanese Restaurant အလုပ်ပေါ်ပါတယ်
အားလုံးပဲမင်ျဂလာပါ Roppongi ဘူတာကနေ3မိနဈလမျးလြှောကျ Don quijote အလုပျပျေါပါတယျ/အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Roppongi ဘူတာကနေ3မိနစ်လမ်းလျှောက် Don quijote အလုပ်ပေါ်ပါတယ်
Paid part-time+internship in UNIQLO (fast retailing Inc. ) / Fashion and apparel / Use your language skills /5minutes walk from ginza station
Uniqlo Ginza မှာ paid intern အနနေဲ့ အလုပျလုပျရငျးအမွဲတမျးဝနျထမျးဖွဈလာနိုငျမယျ့အခှငျးရေးပါ
cleaning job / hand cash weekly, daily payment Ok /5minutes walk form Akado Elementary School-mae Station(nippori liner)
Hall or dish washing staff in osaka /7minutes walk form shinsaibashi station / hand cash - tewatshi OK !!
easy light work / logistics, event venue construction, material loading / Basic Japanese OK ! / Hand cash daily payment